Ururka al-shabaab oo bedelay xubnaha sar sare ee maamulkiisa gobollada Baay iyo Bakool – Radio Daljir
Nofeembar 2, 2013 5:20 b 0
Diinsoor, November 2, 2013 – Ururka Al-shabaab ee ka dagaalama koonfurta Soomaaliya ayaa is bedel ku sameeyey maamulkiisa gobollada Baay iyo Bakool, xili bilihii tegay ay dagaalo dhowr ah ka dheceen gobolladaas una dhexeeyey Al-shabaab iyo meleteriga huwanta ah.
Gudoomiyihii gobollada Baay iyo Bakool ee ururka Al-shabaab Sheekh Mahad Cabdi Kariim ayaa gelinkii dambe ee shalay xilka laga qaaday, in kastoo aan la sheegin sababta is bedelka loo sameeyey.
War ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in sheikh Cabdulaahi Geeddow loo magcaabay gudoomiyaha ururka ee gobolladaas.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa Itoobiya iyo ururka Al-shabaab ayaa weli isku baacsanaya gobollada Baay iyo Bakool, arintan? is-bedelka maamulka ayaa lagu sifeeyey xeelado cusub oo ururku damacsan yahay.